Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka soo Gudbay Xadka Gobolka Gedo uu la leeyahay Itoobiya. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Doolow–FMN– Wararka ka imaanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Maanta Ciidamo Itoobiyaan ah oo aad u qalabeysan ay ka soo gudbeen Xadka Gobolka Gedo uu la wadaago Itoobiya,waxaana Ciidamada ay ka soo gudbeen dhanka degmada Doolow ee Gobolkaasi.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Ciidamada Itoobiyaanka ah ee Maanta ka soo gudbay xadka Gobolka Gedo uu la leeyahay Itoobiya ay gaarayaan illaa Kun Askari,waxaana la sheegay in ay hor dhac u yihiin Ciidamo badan oo Itoobiyaan ah oo imaanaya Soomaaliya.
Ciidamadaan Itoobiya ayaa la sheegay in ay yihiin kuwo Dalka ka saaraya Al-shabaab islamarkaana Madaxweynaha Soomaaliya uu ka dalbaday Dowladda Itoobiya in ay ka gacan siiso Dagaalka Milatari ee Dalka looga saarayo Xarakada Al-shabaab.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa Maalmo ka hor socdaal ku tagay dalalka Itoobiya,Jabuuti iyo Uganda,waxaana uu u tagay si looga gacan siiyo Dowladda Federaalka Dagaalka ay kula jirto Al-shabaab.
Previous Previous post: Shariif Xassan Oo Mooshin Laga Keenay.
Next Next post: Jaamacadda Jig-jiga oo Kaalin Fiican Ka Gashay Jaamacadaha Itoobiya.